Nzira yekuvandudza Amazon yako SEO?
Maererano nehuwandu hwemashoko, vakawanda vanopfuura 55% yevashandisi vanoda kushandura muInternet, vadzokera kuAmazon trading platform kuti vawane zvavanoda. Icho chirevo chekutaura kwevatengi mumazuva edu. Vashandi vanongotarisa chikwata ichi pakutanga nekuda kwechikonzero chezvikonzero zvakajeka zvakadai semukurumbira wakanaka weiwebsite ino, kukwanisa kuenzanisa mutengo uye kuwana mutengo wakanakisisa pawebhu, unyanzvi hwekuverenga zvinodiwa nevatengi, nezvimwe zvakadaro. Uyezve, vashandisi vanoziva kuti mune imwe nyaya yekusava nemafungiro nepuratifomu iyi, vachawana mubairo wakakwana. Zvose izvi zvinoshandisa Amazon kubatsiri kune vatengi nevatengesi. Ndicho chikonzero kana iwe uchida kutsvaga zvakanyanya kukura kwevako vanogona kutenga, Amazon ndiyo yakanakisa yembiru yezvinangwa izvi - set up a small office network. Kuti uwane zvakanyanya kubva pane zvawakanyora pane iyi yekutengeserana, iwe uchada kuita imwe tsvakurudzo yekugadzirisa maitiro ekuratidzira maitiro ako nebhizimisi.
Nyaya ino yakagadzirirwa kukubatsira kuti uvandudze Amazon SEO uye ita kuti michina yako ionekwe pane iyi yakawanda yekutengesa purogiramu.
Nheyo yemiti yakagadzirwa kuAmazon
Pane zvinhu zvakakosha zvinoshandiswa kuisa maitiro ekuvandudza Amazon yako peji SEO. Kana iwe uchida kugadzira zvakanaka zvakagadziriswa mugadzirwa, unofanira kuziva pane zvipi zvaunoda kuisa pfungwa pazviri.
Maererano neAzone A9 kushandiswa kwegoridhethi, munhu anotarisira mutengi anoona data inotevera mushure mekutsvaga kwekutsvaga:
inotarirwa mazwi makuru uye tags;
kushandiswa kwemishonga (ikozvino inowanikwa kana iri muzvitoro);
Zvose izvi zvinogona kugoverwa muzviitiko zvinoshandiswa uye zvinoenderana nezvimwe. Boka rokutanga rezvinhu rinoratidza zvinoshandiswa neAmazon kuti zvienzane nemishonga zvichienderana nemari yakawanda yavanoita kuburikidza nekuita saizvozvo. Zvinhu zvinokosha ndezvakanakira chigadzirwa kana mushure mekutsvaga kwevashandisi.
Ngatitangei kukurukura nezvebasa-based ranking factors. Chokutanga pane zvose, iyo inotendeuka. Kutendeuka kunoonekwa neAngles kushambadza zvinhu. Iwe unogona kushandisa maitiro akawanda anobatsira kuratidza Amazon chigadzirwa chako chiri kutendeuka zvakanaka zvingave. Kana zvasvika pakuwana mufananidzo wakajeka wekutendeuka, Amazon inonyengera. Iwe unogona kuchengeta mitero yakasiyana-siyana seyuniti uye zvidzidzo, asi hazviwani zvakakwana kuti utonge zvose.
Unogona kuwana data yako yekukurukurirana nekuenda kuRiports, zvino Business Reports, Kuwedzerwa kweZvino Tsamba uye pakupedzisira Traffic. Pano iwe unofanirwa kutarisa chikamu chechikamu chemazana mapeji kana mune mamwe mazwi nhamba yezvikamu.
Kuvandudza Amazon yako rankings, iwe uchada kugadzirisa yako kutenga bhokisi rezana. Semuenzaniso, mauniti ako akarayira nekutenga bhokisi ichazivisa kuAmazon kuti uri kutendeuka zvakawanda.
Unogona kukanganisa kushanda-based ranking maererano nehuwandu hwemifananidzo yako nekuvandudza mitengo yekutengesa.
Zvino, ngationei ma Amazon maitiro zvinhu zvinoenderana nekukosha. Nheyo dzezvinhu zvose ndezvenhu hwekutsvaga kwekutsvaga uye ruzivo runoratidzwa peji.
Kuita kuti peji rako rive rakakosha kumubvunzo wemushandisi, unoda kugadzirisa chikwata chako chekutsvakurudza. Iwe unofanirwa kuisa zvakakosha uye zvakagadzirirwa mazwi makuru mubhuku rako uye tsanangudzo kubatsira vatarisi vako vanotora zvigadzirwa zvako pane peji.
Zvinhu zvinokosha zvaunoda kuisa mumusoro wako zvinonzi brand brand, tsanangudzo shoma (ruvara, ukuru, zvinhu, huwandu), mutsara wemuchero uye uyo chibereko ichi chakagadzirwa (vana, vanhu vakuru,. )